Inqabe ukufa ukushayelwa ekhaya iSuperSport igoba iCity inkani - Impempe
Inqabe ukufa ukushayelwa ekhaya iSuperSport igoba iCity inkani
Bebehubhana kanje oBradley Ralani weCape Town City noLucky Mohomi weSuperSport United emdlalweni weDStv Premiership ngoMgqibelo
Inciphise igebe leMamelodi Sundowns iSuperSport United ngokuqoqa amaphuzu amathathu ngokushaya iCape Town City ngo 2-1 emdlalweni weDStv Premiership obuseLucas Moripe Stadium ngoMgqibelo.
ISuperSport ikuveze zisuka ukuthi isekhaya futhi ngeke ikhishwe enye inkunzi esibayeni sayo ngokusheshe ishaye igoli lokuqala. Bekungumzuzu ka-23 ngesikhathi u-Evans Rusike enqamula phakathi kwezitobha zeCity qede wagoba ibhola elihle, lahlala kuGampani Lungu obesesele nomsebenzi olula wokuliphushela enethini.
ICity icishe yalinganisa ngomzuzu ka-40 uMduduzi Mdantsane ethumela elihle ibhola emapalini kaRonwen Williams kodwa laceza kancane, laphuma phezulu.
Akushilo ngesikhathi sekhefu umqeqeshi weCitizens kusebenzile njengoba ezakhe zibuye sezimehl’abomvu zilifuna la igoli. Akuthathanga isikhathi eside zabe sezilinganisile.
Ngomzuzu wesibili kubuywe ekhefini, uBradley Ralani udonse intambo engaphandle kwebhokisi laMatsatsantsa a Pitori, walizwa ngoba selikhala enethini ngemuva kwakhe uWilliams ukuthi selimhlulile.
Njengoba ebesemzwile ukuthi uyashayeka uWilliams, uRalani uphinde wabuya ngemuva kwemizuzu emibili, wakhuthuza izitobha zeSuperSport qede wadedela omunye udalimede kodwa kulokhu walivimba uWilliams.
Amatsatsantsa abe esevuka nawo emaqandeni aqala azama indlela ebheke emapalini kaPeter Leeuwenburgh futhi kwale kancane baphinde bahambe phambili kodwa ibhola likaRusike laphuma eceleni selimhlulile unozinti.
ICity izokhala ngonompempe uPhilangenkosi Khumalo obancishe iphenathi ngomzuzu ka-60 ngemuva kokuthi uMdamtsane bembhudubeze baze bamqumba phansi engaphakathi ebhokisini leSuperSport.
Ngomzuzu ka-80, lugcine lugobile kuLeewenburgh langena elesibili leSuperSport ngekhanda likaThamsanqa Gabuza obesenemizuzu emithathu nje vo engene endaweni kaRusike.
Umdlalo bewusuvulelekile futhi ngonozinti abaphike ibhadi benqaba ukuthi kwande amagoli njengoba bebevimba amabhola anzima.
Le wini inciphise igebe lamaphuzu iSuperSport esele ngawo kwiMamelodi Sundowns njengoba manje seyisemuva ngamabili. Kodwa ke iSundowns isenomdlalo esalele ngawo emuva, okungathi uma iwuwina liphinde livuleke igebe line ngelamaphuzu amahlanu.
Previous Previous post: ICeltic neChippa bacazelane amaphuzu emdlalweni wezegemegeme kwiDStv Premiership
Next Next post: ISundowns iwuqale ngewini umkhankaso wesigaba samaqoqo kwiChampions League